Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 26, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ပပျောက်ရေး - အဲဒါဘာလဲ
Antidote မဆိုသဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ပြည့်စုံ software ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အစွမ်းထက် tool ကိုပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်, ပြည့်စုံအဘိဓါနျ, ဘာသာစကားလမ်းညွှန်များနှင့် PRISM တည်းဖြတ်မူများကိုနှင့်စစ်ဆေးရေးရန်မှန်ကန်သောအတူတကွတတ်၏။ အပြောင်းအလဲတွေအရမ်းမြန်ကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို, အချိန်ကိုချွေတာအနေဖြင့်သင့်ရဲ့အရေးအသားတစ်ခုကိုတိကျခိုင်မာစွာဆုံးမခြင်းများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
သူဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပညာရှင်များနှစ် ဦး စလုံး။ အမှန်မှာ၊ ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအများပြည်သူသုံးအသုံးပြုပြီးသူတို့၏အရေးအသားများကိုပြုပြင်တည့်မတ်ရန်အချိန်ကုန်သက်သာသောပညာရှင်များကအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ Antidote သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်အလွယ်တကူနေရာချထားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်၎င်းကိုဆုံးမသည့်အချက်များ (သဒ္ဒါ၊ စာလုံးပေါင်းစသည်ဖြင့်) တွင်ကုန်ဆုံးသွားသည်။ အကြောင်းမှာကုန်သွယ်မှုတွင်ကုန်သွယ်မှုတွင်အခြားကိရိယာများနှင့်မတူပါ။
ဒါကြောင့် Antidote အချို့စာလုံးပေါင်းနှင့် syntax စိုးရိမ်ရှိသည်သောလူတို့အဘို့, ဒါမှမဟုတ်ဥပမာ non-ဇာတိလူတစ်ဦးမှစိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်လေ့စေနိုင်သည်။
အမှန်မှာထိုကနေဒါ software ကိုအလွန်ထိရောက်သောနှင့်အလွယ်တကူမကျြနှာကိုကယ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများနှင့်ဒေသခံအာဏာပိုင်များအဆင့်ထိပ်တန်းမြင့်နိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့၏န်ထမ်းမှဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
ပညာရှင်များအရေးအသားအဆင့်အတွက်Molière၏ဘာသာစကားကိုနှင့်အတူအဆင်ပြေမရဖြစ်ကြပြီးနေတုန်းပဲ, အရည်အသွေးအကြောင်းအရာကိုကမ်းလှမ်းရန်သတ်မှတ်ချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်အက္ခရာများကိုရေးသားနိုင်မှာရန်ဆန္ဒရှိအဘို့ဤသဘောအရ, Antidote စုံလင်သည် ဥပမာ။
ဖတ်ရန် အလုပ်ခွင်မှာစာလုံးပေါင်းအမှားတွေ - မင်းကိုဖတ်တဲ့သူတွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။
သို့သော်ထို့နောက် ... ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာတစ် ဦး က Antidote ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်မရှိသလောက်စာလုံးပေါင်းနှင့်ဘာသာစကားအမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းနေသော်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သည်ဤကိရိယာကိုအံ့သြစေသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Antidote သည်တကယ့်ပညာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များတိုးတက်ရန်ရှာဖွေနေသည့်ပညာရှင်အသစ်များနှင့်လုံးဝကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အမှားများကိုပြုပြင်ရန်ကိုယ်နှိုက်ကရောမပါ ၀ င်ပါ။ အမှားတစ်ခုစီအားအမှားတစ်ခုစီအတွက်ဤအမှားမှမည်သည့်နေရာမှဖြစ်ပေါ်သည်ကိုရှင်းပြရန်အချက်ပြလိမ့်မည်။ ဤနည်းလမ်းသည်သင့်အားအမှန်တကယ်ဘဝအခြေအနေများနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဘာသာစကားအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
အလုံးစုံတို့အဘို့တစ်ဦးကဘာသာစကားနှစ်မျိုး tool ကို
ကနေဒါရည်ညွှန်း tool ကိုပြုလုပ် Antidote နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်တစ်ဦးရေးသားဖို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စစ်ဆေးနေစာလုံးပေါင်းအတွက်နာရီဖြုန်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ခွင့်ပြု သငျသညျအင်္ဂလိပ်အဖြစ်စုံလင်ခြင်းမှမထိန်းချုပ်ဘူးဘာသာစကား; သို့မဟုတ်သင်ပွငျသစျထဲတွင်အသုံးပြုရန်လျှင်သင့်ရဲ့ပြင်သစ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့သောတူညီသောလမ်းအတွက်အဲဒီဘာသာစကား၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး။
ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အဓိကအားသာချက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်စာသားတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသောဘာသာစကားကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လုံလောက်သောအစွမ်းရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင် Word ထက်ပင် ပို၍ ပင်ကောင်းပါသည်။ ဒီအလေ့အကျင့်ကအပြစ်မဲ့ပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဘာသာစကားကိုနားလည်တဲ့အမှားကအရမ်းပြaticနာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်မှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်သတိ မရှိ၍ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မဟုတ်ပါကပြင်သစ်စာသားရှိအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကိုရှုပ်ထွေးပြီးအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်déjà vu ကဲ့သို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်အသုံးပြုသောပြင်သစ်အသုံးအနှုန်းသည်မကောင်းသောဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဖတ်ရန် တစ်အားလပ်ရက်တောင်းဆိုချက်အတွက်အီးမေးလ်က template ကို
အားလုံးရေးသားခြင်းအေဂျင်စီနှင့် copywritting များအတွက်မရှိမဖြစ် tool ကို
အမှန်စင်စစ်ဤအေဂျင်စီများမကြာခဏသင်မိနစ်အစားနာရီအတွင်း proofreading လျှော့ချပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အချို့သောတကယ်အရေးကြီးသောအလုပ်ပမာဏတစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Antidote ၏အသုံးပြုမှုကို outsource လေ့ရှိပါတယ်။
သဘောပေါက်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, Antidote ပင်သင်တစ်ဦးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအချိန်ချွေတာဖြစ်လိမ့်မည်သည့် proofreading ဇာတ်စင်, skip ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အသင်းများကိုတပ်ဆင်။
စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းအကြောင်းပြောနေတာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့သေချာပေါက် Antidote ပိုင်းတွင်ပြင်သစ်စဉ်းစားကြဘူးနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမကြာခဏသိသာအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဤအ2software ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, Ergonomics တကယ်က၎င်း၏ကြင်နာ BonPatron အများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်မျှသာစာလုံးပေါင်း Checker သူတို့ကို relegating, တပ်မက်လိုချင်သောအခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
တဦးတည်းဈေးကွက်ထဲမှာနှစ်ခုသာအမှန်တကယ်ထိရောက်သောဆုံးမပဲ့ပြင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်လျှင်, အစစ်အမှန်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှန်တကယ်9နှင့် Antidote အကြားပေါ်ထွန်း ရင်းနှီးစွာ Pro ကို။ အဲဒီနှစျခုရဲ့အရည်အသွေး software ကိုသော်လည်း, တူညီသော ilk ၏ကံမကောင်းမဟုတ်ရင်းနှီးစွာ Pro ကို Antidote9နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ။
စျေးနှုန်းအပြင်ရင်းနှီးစွာ Pro ကို Antidote မျက်နှာ၏အဓိကမရှိခြင်း Antidote စျေးကွက်အပေါ်တစ်ခုတည်းသောဘာသာစကားနှစ်မျိုးအရည်အသွေးကို tool တစ်ခုဖြစ်သည်မတူပဲသူသာ, ပွငျသစျထဲတွင်အလုပ်လုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး၏အများကိန်းအတွက်အနည်းကိန်းကို support နှင့်ဝါကျစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအခါနှစ်ခုအကြားရွေးချယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်အချက်, အဆုံးမပဲ့ပြင်ကယ့်ကိုပိုပြီးအရည်အသွေး Antidote ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဘက်မှာရင်းနှီးစွာ Pro ကိုမရေရာဒွိဟ၏အမှု၌အအနည်းကိန်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် Cordial Pro သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Antidote နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်စျေးကြီးလွန်းနေပါသည်။
Antidote၊ ထိရောက်သောဆော့ဝဲဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်မည်သည့်အဖိုးအခဖြင့်နည်း။
နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်တရာယူရိုယခုဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အများအပြားပိုပြီး features တွေ၎င်း၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်နှစ်ယောက်ထက်အဆစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ် ...
လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ, Antidote ဆော့ဖ်ဝဲရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏စာလုံးပေါင်းတိုးတက်လာဖို့ကိုဘယ်လို။ နိုဝင်ဘာလ 21st, 2018Tranquillus